Raharaha mpanjifa - Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd.
Inona no lazain'ny mpanjifa
XRL Co., dia manana ekipa ara-teknolojia matanjaka miaraka amin'ny injeniera Japoney hamaha olana isan-karazany amin'ny fampiharana sy ny fampiasana ny bearings.
Manana mpiasa matihanina hiasa izahay.Ary izahay dia afaka araka ny sary na ny fepetra takiana amin'ny famokarana namboarina.
Ankoatra ny varotra an-trano, ny XRL dia efa nanondrana tany amin'ny firenena 120 mahery.
K ihany no manantena ny hiara-miasa amin'ny mpanamboatra izay namokatra amin'ny bearings avo lenta.Mila mampiasa XRL izy mba hanoloana ny SKF amin'ny tsena farany
Ankasitrahana tokoa izahay noho ny fahatokisany, tsy dia be resaka izy ary nametraka baiko fitsarana avy taminay.Mandray ny kalitao amin'ny toerana manan-danja izy ary mitovy lanja amin'izany izahay.
Taorian'ny didy fitsarana dia nametraka baiko maromaro taminay indray izy, ary miresaka izahay fa ho avy tsy ho ela ny didy vaovao.
Manana fikasana hampivelatra azy ho solontenan'ny marika XRL ao Pakistan izahay.
Rosia dia tsenan'ny fanjifana lehibe.Saingy amin'ny maha-politika manohitra ny fanariam-pako, dia sarotra be ny fanafarana mpanjifa avy any Shina.Nandritra ny taona maro niainana fiaraha-miasa amin'ny namana sy mpiara-miombon'antoka Rosiana, manana mpandefa entana matotra isika dia afaka manao fitaterana avy any Malezia na Thailand, afaka mamonjy betsaka ho an'ny mpanjifa izany.Afaka manao Thailand sy Malezia CO ho an'ny mpanjifa mba hanao ny fomba fanao.
Ny fifandraisan'i Afrika amintsika dia tsara toy ny eo amin'ny havana lavitra sy ny mpiara-monina akaiky.Tany am-piandohana, J dia nanomboka tamin'ny santionany vitsivitsy mba hitsapana ny kalitao sy ny valin'ny tsena.Taty aoriana dia nampitomboiny ny isan'ny baiko isan-karazany, Na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra amin'ny coronavirus tamin'ny Aprily 2020 aza, dia nametraka baiko iray ho anay ihany koa izy, dia mankasitraka ny fanohanana avy aminy.Amin'ny maha-kalitao sy hatsaran-tarehy ny fonosana XRL, dia lany haingana tao anatin'ny andro vitsivitsy taorian'ny nahatongavany teo amin'ny seranana.
N no masoivohonay any Però, ary izy no solontenay voalohany tany amin'ireo firenena any Amerika Atsimo.Nanomboka tamin'ny baiko kely voalohany ary nanatitra LCL, Fa izao izy dia afaka manafatra 1 * 40FT container isam-bolana.Ankehitriny, isika dia tsy ny raharaham-barotra mpiara-miasa ihany koa ny namana tsara eo amin'ny fiainana.
Amin'ny maha-agent anay miaraka amin'ny marika XRL, dia manome azy fanomezana maimaim-poana amin'ny dokam-barotra izahay, toy ny penina sy T-shirt misy XRL LOGO, ary manome ny fiarovana ny tsena sy ny serivisy matihanina tsara indrindra izahay, Mamolavola ny tsena amin'ny tanana izahay.Ary matoky izahay fa izy no ho mpandraharaha lehibe indrindra any amin'ireo firenena any Amerika Atsimo atsy ho atsy.
Nihaona tamin'ny fampirantiana Shanghai 2016 izahay. Manao OEM izahay miaraka amin'ny marika ho an'ny T, Nanana baiko be dia be izy isan-taona ary ny bearings dia mivarotra tsara any amin'ny tsenan'i Ukraine.
Y avy any Okraina ihany koa, Izy no nitantana ny orinasan'ny kojakoja fiara teo an-toerana, nandeha tany Chine imbetsaka isan-taona izy ary nanao ny fividianana, nanome baiko anay ny marika LADA, VPZ, VBF, SPZ Etc.
M nahita anay tamin'ny alàlan'ny tranokalan'ny orinasa, ary efa nametraka baiko 5 unitil izao.Na dia tsy dia betsaka aza ny hamaroan'ny baiko dia manana fahafahana lehibe ho an'ny fampandrosoana izany.Ankoatra izany, ho an'nyvietnamianatsena, nanana traikefa be dia be ho an'ity tsena ity izahay, manantena ny bearings avo lenta fa afaka manome azy ireo ny COPE voamarina izahay mba hanampiana azy ireo hanao fanafarana mahazatra miaraka amin'ny adidy fanafarana ambany.